UKUPHILA: YINI IMIBUZO EYINHLOKO YABANTU - Element Society
UKUPHILA: YINI IMIBUZO EYINHLOKO YABANTU
Mashi 19, 2018
Okumangazwa kakhulu yizindaba zaseBrithani, sekuyisikhathi sokuqeda izinkolelo eziphathelene 'nentombazane yeferal' ukuthola ukuthi yini ebaluleke kakhulu kubo nokuthi yini eyenzayo ngenxa yalokho. Joyina iphrofayli yeziqu ze-Year 12 ohlelweni lukazwelonke lwase-UK lokuxhobisa kwentsha, iNational Citizen Service (NCS) engxoxweni. Yizwani imicabango yabo mayelana nezihloko ezivela kulo lonke ulwazi, umphakathi, amaphupho kanye nezifiso, abezindaba, abathonya, inkululeko nokuvukela.
Umvolontiya we-Element u-Cheyenne umemezelwe ukusekela i-NCST eMhlanganweni Wezokukhangisa Wentsha ngoLwesine, ngoMashi 22, 2018. I-Cheyenne evezwe njengenye yezifundo zocwaningo ku-NCS Youth Report eyethulwa kuNgqungquthela kaDisemba. I-Cheyenne izohlala ephaneli enezinye izinombolo ezimbalwa ze-NCS Grads and Graduate Manager uJames Canvin ngesenzakalo seviki elizayo eLondon.